36 အဘို့ရလဒ် gangnam style
2 ta ta ta လူကြီးလူကောင်း
နွေရာသီကြွလာ၏, နှစ်ခုလှပသောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူ Oppa သင် oppa တစ်အံ့မခန်းအဆင့်တည်ဆောက်ကူညီရမယ်, ဂီတဗီဒီယိုသည်မိမိအသစ်သောသီချင်းကို "လူကြီးလူကောင်း" ရိုက်ကူးမည်မှကမ်းခြေသို့ရောက်ကြ၏။ လူကြီးလူကောင်း Ta Ta Ta 2, သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်, သစ်မြင်ကွင်းများအသစ်အတှေ့အကွုံကပျော်မွေ့,fရှိ
PSY Gangnam စတိုင်လှံလက်နက်
PSY က terrorists.he အားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည် PSY ကဒုတ်, dartboard မှ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့ခဲ့ PSY.Get တစ် highscore ထိခိုက်စေပါဘူး, သင့်လှံလက်နက်တခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ပေးပါ, သင်ပြန် PSY ကိုကယ်တင်အပေါ်လာလိမျ့မညျ!
PSY လူကြီးလူကောင်း ta ta ta ဂိမ်း
ဒီဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်၎င်းတို့၏နာမည်ကျော်ကွက်ပါစေ, ဒါပေမယ့်အာရုံစူးစိုက်မှုလည်းသင်တို့အဘို့အလိုင်းရဲ့အဆုံးကိုဆိုလိုတာလို့သူခြင်းသည်ကခုန်နေစဉ်ဆိုက် over tip မဟုတ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိဖြစ်နဲ့အဆိုတော် Psy တစ်ဦးယာယီစင်မြင့်ကိုတက်သတ်မှတ်ထားဖို့ယုတ္တိဆင်ခြင်ခြင်းကိုသုံးပါ
ခြောက်ချား chic ဆင်မြန်း၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံဒီမိန်းကလေးရဲ့ဗီရိုမှာလြှို့ဝှကျထှကျသှား-peek ကို ယူ. မြည်းကြိုးကိုဖြည်ထိပ်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလွှာ miniskirts, ဒူးအရပ်ရှည်ရှည်ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ပန့်များနှင့်အဝတ်အစားပေါင်းစပ်ဒီအရူး Gangnam စတိုင်လမ်းကြောင်းသစ်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်လိုမြင်!
Gangnam Style ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်တပ်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုန်ခုန်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်ဖို့ Continue ။
Gangnam Style ကို Dress Up ကိုမိန်းကလေး။ သင် Gangnam စတိုင်ကခုန်ဖို့ဘယ်လိုသိသလား ကခုန်၏ဤစတိုင်ယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်ပြီး, သူတို့နာမည်ကြီးဂီတကိုကြားလျှင်လူတိုင်းကစတိုင်ခုန်တတ်ကြ၏။ ဒီမိန်းကလေးကောင်းတစ်ဦး Gangnam စတိုင်နှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်။
Oppa ရုရှားစတိုင်အားကစားပြိုင်ပွဲ။ ရဲ့ပျော်စရာအဘို့ရုရှားစတိုင်နှင့်အတူကခုန်ကြကုန်အံ့။ ဒီ Gangnam Style ကိုဂိမ်းများ၏အခြားဗားရှင်း။
Gangnam Style ကိုပြိုင်ပွဲဂိမ်း။ ဘီးနှစ်ဘီးပေါ်တွင်စူပါယှဉ်ပြိုင်လောင်းရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်ကိုရွေးချယ်ပါ, သင်ပထမဦးဆုံး finish ကိုလိုင်းဖြတ်ကူးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင် Psy Justin Bieber ကိုနေ့ခြင်း၏ပထမဦးဆုံး duel ဖြစ်စေမည်။
တစ်ဦးကထူးဆန်းတဲ့ရောဂါဖုတ်ကောင်သို့ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကလူလှည့်ထင်ရှား။ , ဤရွေ့ကားဖုတ်ကောင် Gangnam မြို့ရဲ့လူဦးတိုက်ခိုက်ရန်။ လက်ထောက်နှင့်အတူ Psy ရက် 20 နှင့်ညဉ့်၌ဖုတ်ကောင်မရှိဘဲ Gangnam မြို့မစ်ရှင်ကာကွယ်ထားကြပြီ
ကိုရီးယားရက်ပ် PSY ကကြယ်ပွင့်အောင်မြင်မှုကို Gangnan ပုံစံကြည့်ဖို့မြင်းမပါဘဲသူ့အကွက်ခုန်ကူညီပါ။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစွမ်းအင် bar ကိုဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုသတိထားပါ။
သငျသညျ PSY ကစားမှု Gangnam စတိုင်ရောသမမွှေကျွမ်းကျင်နိုင်ပါသလား? ဘယ်လို Play မှ: သူ၏ဂီတဗီဒီယိုသည် YouTube spinning-ယခုသိရသည်ဤနေရာတွင် PSY ရဲ့အရူးကခုန်ရွေ့လျားတုရန်သင့်အခွင့်အလမ်း! ဒီကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်း Dance Dance တော်လှန်ရေးမှနည်းနည်းဆင်တူသည်။ သူတို့အဖြစ်မှန်ကန်သောမြှား keys ကိုဝင်တိုက်
Gangnam စတိုင် ta ta ဂိမ်း
ဒါဟာစူပါ၏ကိုရီးယားအဆိုတော် Psy စာရေးဆရာ Gangnan စတိုင်သင်သွားလေရာရာ၌သင်ဤအနည်းငယ်သာသီချင်းသီဆိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်ထိမှန်နှင့်ဤအချိန်သူနှင့်အတူအကောင့်အသစ်များ၏အခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်ပုံရသည်။ ထိုပတ္တူအဘို့ဤအဆိုတော်ရှိသည်ဖို့တတ်နိုင်သမျှသူ့ကိုထိမှန်နှင့်
oppa Gangnam စတိုင် caishen
သင်သက်သေပြပြီးမြောက်ရန်ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်လိုလျှင်အပေါ်ရွှေ့ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, မှတ်ဂိုးသွင်းဖို့လမ်းတလျှောက်တွင်အနီရောင်စာအိတ်စုဆောင်းကြီးစွာသောတရုတ်နဂါးကို run နှင့်စတိုင် Gangnam Style ကို
oppa Gangnam စတိုင်ကခုန်
တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော် Psy ကခုန်တကမ္ဘာလုံးအောင်မြင်သော Gangnam Style ကိုသည်ကိုသင်တို့သည်ဂီတအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းကိုကူညီပါ။ ဒီကခုန်ကောင်းသောအမှုကိုပြုမှမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများကိုနှိပ်ပါ။ Oppa Gangnam Style ကိုအက
xmas Gangnam စတိုင်ဘဏ္ဍာကို
ထိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာ Gangnam စတိုင်ဂိမ်းနှင့်အတူကခုန်ကြကုန်အံ့, ထိုတစ်ချိန်တည်းမှာ PSY အဆိုတော်နှင့်အတူသင်တတ်နိုင်သလောက်အဖြစ်များစွာသောဘဏ္ဍာကိုဖမ်းရန်
တောင်ကိုရီးယားရက်ပ် Psy ရဲ့ Gangnam Style ကိုထက်ပိုမို 805m အမြင်များအဘို့ဤမျှနှင့်အတူအားလုံးအချိန်အရှိဆုံး-watched ယူကျု့ဗီဒီယိုဖြစ်လာသည်။ ဒီ Gangnam Style ကိုပျော်စရာဂိမ်းထဲမှာသင်ကမိမိအလူကြိုက်များခြေလှမ်းများနှင့်အတူကခုန်တတ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုသတိပွုမိခြင်းမရှိဘဲရယ်စရာလှုပ်ရှားမှုများပြုပါရန်ရှိသည်
မော်ကွန်း Gangnam စတိုင်ခုန်
အထိခိုက်စတိုင် Gangnam ကိုရီးယားအဆိုတော် Psy ၏ကြယ်သင်သည်တတ်နိုင်ရှိသမျှကိုစိန်ရဖို့ရုံးခွဲမှနျဌာနခှဲကနေခုန်ရန်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာအသက်ရှုမှားဒီစိန်ခေါ်မှုဖြည့်စွက်ရန်အဘို့အသွက်လက်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
Gangnam စတိုင်တက် PSY စားဆင်ယင်ကစား
Psy ရဲ့ကြည့်ရှုပြောင်းလဲနေတဲ့ပျော်စရာရှိသည်နှင့်သူ၏အသစ်တစ်ခုတည်း, Opa Gangnam Style ကိုကြားနာပျော်စရာရှိသည်။ အမတ်မတ်, ဆံပင်နှင့်ပိုပြီးကောက်ရန်သင့် mouse ကိုသုံးပါ။
မြှား keys ကိုအဓိကမေးနှင့်ဒဗလျူနှင့်အတူ Gangnam အကအခုန်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ! Gangnam Style ကိုဂိမ်းအွန်လိုင်း Play
ကမ္ဘာတဝှမ်း Gangnam စတိုင်
အဆိုပါ Gangnam Style ကိုကခုန်မုန်တိုင်းအားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုယူ။ ဒီရယ်စရာဂိမ်းထဲမှာသင်ကကမ္ဘာလုံးပတ်လည်ကိုရီးယား Psy အဖြစ်ခုန်တတ်ကြ၏။ CD တွေတက် Pick နှင့်သေစေနိုင်သောဥက္ကာခဲသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ ကမ္ဘာ့ဖလားခန့် Gangnam ခံစားပါ။ controls: Arrows = ရွှေ့
Gangnam စတိုင် PSY ဂိမ်း
Gangnam Style ကို Psy ဂိမ်း။ သငျသညျနာမည်ကျော် Gangnam Style ကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါသလား ထိုအခါ Dress ၌သင်တို့၏ဆန္ဒနှင့်အညီနာမည်ကြီးအဆိုတော်တက် mode ကိုဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုသင် Comapre mode မှာမူရင်းပုံထဲမှာမြင်ရအတိအကျအဖြစ်ဝံ့နှင့်သူ့ကိုဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ယူပါ!
အနီရောင်ကော်ဇောဂိမ်းထဲမှာ Gangnam စတိုင်
အနီရောင်ကော်ဇောပတ်ပတ်လည်လာပြီဖြစ်ကြောင်းအားလုံး CCS ဖမ်းရန် Gangnam အောင်မြင်မှု၏ကိုရီးယားအဆိုတော် PSY ကစာရေးသူကိုကူညီပါ။ သူကအဓိကဆုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, သို့သော်ဤစိန်ခေါ်မှုဖြည့်စွက်ရပါမည်
အားလုံးအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်မောင်းသင်မူကား, crash မသတိပြုရကြမည်။ သင်တစ်ဦးနဂါးထရပ်ကားမောင်းသူအဖြစ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသနိုင်ပါသလား?
သဲကန္တာရပြိုင်ကား omniverse ben 10
သငျသညျလျင်မြန်စွာပြီးမြောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်မှာဘင် 10 Omniverse ကန္တာရပြိုင်ပွဲဂိမ်း။ ဘင် 10 လူအပေါင်းတို့သည်အတားအဆီးဖြည့်စွက်နှငျ့သငျမြန်အောင်လုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်မြင့်မားခုန်လိမ့်မည်သမျှသောပစ္စည်းကိုစုသိမ်းကိုကူညီပါ။
စက်ရုံခုခံကာကွယ်ဖို့လမ်းတလျှောက်တာဝါတိုင်တည်ဆောက်။ သငျသညျရွေးချယ်စရာအဆင့်မြှင့်တင်ကြည့်ဖို့ကိုတည်ဆောက်လေပြီတစ်မျှော်စင်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ရန်သူများကိုပေါက်ကွဲကနေကာကွယ်ပေးဖို့သင့်ရဲ့ရဲတိုက်ဘို့ဒိုင်းလွှားကိုဝယ်ကြလော့။ ရနျသူမြားကိုနှေးကွေးစေရန်ရေခဲတာဝါတိုင်တည်ဆောက်။ မီးတာဝါတိုင်များနှင့်က Ultra တာဝါတိုင်မီးရှို့မည်
ပန် left နှင့်လက်ျာနှင့်သူတို့သုညမှသင်၏ကျန်းမာရေးကိုဆင်းယူရှေ့တော်၌ထို baddies နှင့်မီးပေါ်မှာအတွက် zoom ။
ဂျယ်ရီနှင့်သူ၏နောက်လိုက်တစ်ဦးအန္တရာယ်များသော labyrinth အတွက်ပိတ်မိနေကြပါတယ်။ သငျသညျဂျယ်ရီလုံခြုံစွာသူ၏နောက်လိုက်ထွက်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ကူညီပေးနိုင်သလဲ
ben 10 ရဲ့ဖုတ်ကောင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး